Ngesikhathi Ukhulumé odongeni imidwebo ezingqondweni zabantu abaningi, kukhona emgwaqweni, udonga futhi ebhalwe kusuka isifutho ukupenda izinhlamvu. Yiqiniso, lena akuyona art, kodwa kuyinto phansi okumsulwa. Kodwa kukhona omunye umuntu wakwazi ukuguqula isenzo phansi ubuciko. Ngaphansi kwesimo izindonga nge imibhalo eqoshiwe ahlukahlukene, amadlingozi ekumeni zabantu. Lingubani leli qhawe?
Lona umculi esuka eBrooklyn okuthiwa uDavid Cassan. Amadlingozi nge ezingeni lelisetulu ngokuningiliziwe ukuthi imisebenzi yakhe isizinda izindonga ibukeke izithombe zangempela. umbimbi kanye isikhumba ngamunye amaseli ekumeni aseMelika izakhamuzi zaseBosnia zifana kusuka into yangempela. David ungomunye walabo abaculi ezingavamile eziye izuzwe eliphakeme ubuchwepheshe kanye ubuciko. Ngamunye imidwebo yakhe - wobuciko. ekumeni kwakhe amadlingozi ngamafutha. Cassan kwi website esemthethweni inikeza ulwazi ngaye, umsebenzi, workshop yakhe zemfundo nokuningi.
Portraitist kuyinto lukwazi ukushukumisa ngendlela sangempela abaculi abasha. Uma omunye wabo kukhona umqondo ukuba bangayeki izifundo zakhe, khona-ke kufanele nakanjani uzijwayeze imidwebo kaDavide. Futhi mhlawumbe lezi zinto iyophuma kwekhanda lami. Phela, ukudala yobuciko ezifana Cassan wafunda iminyaka eminingi, bese wasebenza career abo. Yiqiniso, alolu bayakwazi ukufeza, akubona bonke kodwa kuphela abanamakhono kakhulu. Kodwa ukuze uthole ithalenta, kufanele usebenze. Ngaphandle kungaphumeleli.
Udweba kanjani iphothifoliyo: Umhlahlandlela